Zon'olombelona · Jona, 2020 · Global Voices teny Malagasy
Zon'olombelona · Jona, 2020
Tantara mikasika ny Zon'olombelona tamin'ny Jona, 2020
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 30 Jona 2020
Ho ampahany amin'ireo fepetra hiadiana amin'ny COVID-19, i Jordania, i Oman, i Maraoka, ary i Emirà Arabo mitambatra sy i Yémen dia samy nandràra avokoa ny gazety an-tsoratra mandra-pisian'ny toromarika vaovao indray.
Frantsa 30 Jona 2020
Tena ao anatin'ny fanetsehana erantany manohitra ny fanavakavahana, mizarazara ny hevitra ao Frantsa momba izay hiafaran'ireo sarivongana mampiseho endrika mifandray ara-tantara amin'ny fanandevozana sy ny fanjanahantany.
Jona 2020, iray volan'ny #BLM ao Japàna
Azia Atsinanana 29 Jona 2020
Ny volana Jona, nitranga tany aminà tanàna isankarazany manerana an'i Japàna ireo famoriambahoaka "Black Lives Matter", tafiditra ho isan'ny fanehoana firaisankina erantany miaraka amin'ireo mpanao hetsipanoherana ao Etazonia sy any amin'ireo firenena hafa.
Diarin'ny COVID-19 avy any Wuhan: Rehefa lasa fanangonam-baovaon'olom-pirenena ny diary
Azia Atsinanana 18 Jona 2020
"Lasa toy ny bibin-tsaonjo miova ho lolo ny diary rehefa mandeha ny fotoana."
Azia Atsinanana 17 Jona 2020
"Herintaona izay no nandaozanao anay. Tsaroako fa ianao no olona voalohany nilaza ireo Fitakiana Dimy."
Afrika Mainty 16 Jona 2020
« Ny hadisoana vitako no tsy maintsy resahako raha hiresaka momba an'i George Floyd »
Amerika Avaratra 15 Jona 2020
Sainiko ireo fotoana nanaikerako ny molotro fony ireo dadatoako niala vonkina nitroatra noho ny fihetsika mahatsikaiky nataon'ireo mainty, ny hakamoan'izy ireny, ny tsy fahaizany...
Miady mafy amin'ny fitadiavana ireo razana niharam-boina ny fianakaviany taorian'ny fianjeran'ny zotram-piaramanidina iraisampirenena iray tany Pakistan
Azia Atsimo 15 Jona 2020
Nangatahana mba hanome ADN hamantarana ireo razana ny fianakavian'ny niharam-boina tamin'ny Zotra PIA PK8303.
‘Indonezia, na ahoana na ahoana’: Ketraka amin'ny fomba fiady amin'ny COVID-19 ireo miasa eny amin'ny lohalaharana
Azia Atsinanana 03 Jona 2020
"Nivarotra ny ainay izahay, saingy kely noho ny tokony ho izy ny aloa aminay. Mpanampy mpitsabo an-jatony no miatrika fampihenana/fanapahana karama ary nohazonina ny karaman'ny volana faha-13n-dry zareo."